Somalia:Gacan Kahadal Kale Oo Ka Dhacay Baarlamaanka | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Gacan Kahadal Kale Oo Ka Dhacay Baarlamaanka
Muqdisho,Somalia – Waxaa lagu soo waramayaa in qaar ka mid ah xubnaha Baarlamaanka uu soo gaaray daqaro iyo dhaawacyo ,kadib markii uu gacan ka hadal dhex maray maanta xubno kasoo kala jeeda labada kooxood ee kala taageersan Ridista iyo taageeridda Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Waxaana lagu soo waramayaa in arrintani dhacday kahor intii uusan furmin kulan ay baarlamaanku maanta yeesheen.
Waxayna dad goob joog ahaa oo u waramay warbaahinta oo ay ku jiraan wariyayaal ay sheegeen inay jiraan dhaawacyo iyo rag madaxa la qaaday.
Xildhibaanada la sheegay inay xilka ka qaadeen Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa lagu waramay inay shir ku lahaayeen xaruunta baarlamaanka ayna wateen qorshihii lagu soo dooran lahaa Gudoomiye cusub,kadibna waxaa halkaa tagay xildhibaanadii kale ee taageerada uhayay Shariif Xasan oo isagu ku maqan shirka wadatashiga ee ka furmay Garowe,waxaana halkaa ka dhashay buuq, sawaxan iyo in xildhibaanada qaarkood ay is gacan saaraan,qaarkoodna uu soo gaaro dhaawacyo.
Waxaa la sheegay in goobta uu yimid Gudoomiye Kuxigaanka 2aad ee Golaha Baarlamaanka,sidoo kalena uu yimid Gudoomiye KMG ah oo ay xildhibaanada ridista Gudoomiyaha Baarlamaanka wata ay doorteen.
Waxaana lasoo bandhigay mooshin ah guddi ka shaqeeya doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka ama shir gudoonka,waxaana la sheegay inay soo xaadireen xildhibaano tiradoodu tahay 290.
Waxaa markaa goobta yimid xildhibaanadii kasoo horjeeday ee taageersan Gudoomiyaha ay sheegeen xildhibaanada shirsani inay horay xilka uga qaadeen.
Haddaba intaan kulankii furmin ayay isku dhaceen labadii kooxood,halkaana waxaa ka dhashay in xildhibaanada qaarkood ay soo gaaran dhaawacyo.
Warar kale ayaa sheegaya in kooxdii taageersanayd Shariif Xasan,banaanka la dhigay.
Marka kadib shirkii dib loo furtay hoggaankii shirkana uu la wareegay Gudoomiye kuxigeenkii 2aad ee Baarlamaanka Axmed dhimbil Rooble Casowe uuna goobta kahadlay .
Gudoomiye kuxigeenka 2aad ayaa sida warbaahinta dawladda lagu sheegay tilmaamay:
In qodobka 38 aad baarlamanka uu sharci ahan u siinayo in uu guddoomiyo fadhiga baarlamnaka, waxa uuna cod u qaaday tirade ogol in uu soo magacaabo guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamanka waxaana ogolaatay in la soo magacaabo guddigaasi 287 mudane halka 2 ka mid ah ay diideen hal xildhibanna uu ka aamusay.
Guddoomiye ku xigeenka 2 aad ee baarlamanka ayaa dhanka kale sheegay” in uu la wareegay awooddii baarlamanka” islamrkaasna loo soo gudbiyay mooshin ka dhan ah “guddoomiye ku xigeenka 1 aad ee baarlamanka C/weli Mudey” isago intaasi ku daray “in doorashada guddoomiyaha baarlamanka la qaban doono 15-30 maalmood gudahood sida uu qabo sharciga baarlamanka”.
Xildhibaanada Soomaaliya qaarkood oo horay xil kaqaadis ugu sameeyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan,ayaa xilkaqaadistaa waxaa kasoo horjeestay Shariif Xasan,waxa uuna sheegay inay sharci darro tahay isagoo dhanka kale sheegay in lagu wada joogo Heshiiska Kampala.
Waxaa dhacdadan la filayay in sharciyo baarlamaan ama maxkamad lagu kala baxo,waxaase dhacday in umaddii Soomaaliyeed meelay joogaanba “waa cusub uu ku baryo” ayna ogaadaan in Baarlamaanka & Dawladda Soomaaliya uu ka awood weyn yahay Heshiiska Kampala ee la sheegay in madaxda Soomaalida laga saxiixay,halka R/wasaare Farmaajo na darka lagaga saaray.
Dhinaca kalana ay Baarlamaanku ay gacantooda ay isku dileen kadib markii ay ansaxiyeen heshiiska.
Waxaana walwal laga qabaa waxa dambe ee kasoobaxa shirar is dabayaal ah oo soomaalida loo qabanayo oo maalinba magac cusub loo bixinayo iyo talada waddanka ee kasii baxaysa gacanta dawladda siina galaysa waddamo shisheeye,shakhsiyaad iyo beelo gaar ah,laguna baabinayo saami beeleedkii ay soomaali wax ku qaybsatay iyo qaranimadii Soomaaliya,laguna dhiiri galinayo dalku inuu ukala go’go beel beel iyo gobol gobol.
Maxamed Cabdi Afdheere.
Shirka Wadatashiga oo Ka Furmay Garowe – CAIRO:Egypt detects foreign plot